Phosphate ire ọkụ retardants Manufacturers & Suppliers - China phosphate ire ọkụ retardants Factory
Inye na tributoxy ethyl phosphate price alo, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, n'etiti ndị magburu onwe tributoxy ethyl phosphate emepụta na China, na-eche ka ị zụta nnukwu tris (2-butoxyethyl) phosphate, tbep, kp-140, 78-51 -3 meputara ulo oru ya. Aha aha: TBEP, Tris (2-butoxyethyl) phosphate2. Molekụla arọ: 398.483. CAS NO.: 78-51-34．Molecular Formula: C18H39O7P5．Specificaionts: Ọdịdị: Colorless orlight-yellow transperent liquidRefractiveIndex ...
Nkọwa: Tris (2-chloropropyl) phosphate bụ mgbakwunye ụdị obere molekụla dị arọ halogen phosphorus ire ọkụ retardant na ezigbo ire ọkụ retardant mmetụta, tumadi eji na polyvinyl chloride, polystyrene, phenolic resin, acrylic resin, roba. Na ire ọkụ retardant nke coatings, na-ọtụtụ-eji polyurethane adụ ụfụfụ, isiike ụfụfụ na plastic ngwaahịa. Ọ bụkwa ezigbo plasticizer. Tris (2-chloropropyl) phosphateis eji dị ka ihe mmako halogenated phosphate ire ọkụ retardant na plasticizer, co ...
Inye na triethyl phosphate price consult, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, n'etiti ndị magburu onwe triethyl phosphate emepụta na China, na-eche ka ị zụta nnukwu 78-40-0, ethyl phosphate, phosphoric ether, tep na-emepụta ụlọ ọrụ ya. 1.Synonyms: Ethyl Phosphate; TEP; Phosphoric Ether2.Molecular Formula: (CH3CH2O) 3PO 3.Moulecular Weight: 182.164.CAS No.: 78-40-05. Nkọwapụta: Ọdịdị Achromatic transperent mmiri ...
Inye na tris (2-chloroethyl) phosphate price consult, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, n'etiti ndị magburu onwe tris (2-chloroethyl) phosphate emepụta na China, na-eche ka ị zụta nnukwu 115-96-8, tris (β -chloroethyl) phosphate, achi na-etolite ulo oru ya. 1. Okwu okike: TCEP, tris (β-chloroethyl) phosphate2. Usoro Molekụl: C6H12CL3O4P3. Molekụla arọ: 285.54. CAS Mba.: 115-96-85. Ọdịdị: Colorless ...
Nkọwa: Tricresyl Phosphate bụ kemịkalụ kemịkalụ nke nwere mkpụrụ ndụ dị nkọ nke CH21H21O4P (CH3C6H4O) 3PO. Tricresyl Phosphate bụ ihe na-enweghị ntụ ma ọ bụ na-acha odo odo odo mmanụ. Ọ bụ ihe na-esi ísì ụtọ, na-akwụsi ike, na-adịghịkwa agbanwe agbanwe. Ọ nwere ezigbo plasticizing ire ọkụ retardancy, mmanụ eguzogide, eletriki mkpuchi, na mfe nhazi. Tricresyl Phosphate anaghị igbari na mmiri ma nwee soluble na organic solvents dị ka benzene, alcohols, ethers, akwukwo nri mmanụ, ịnweta mmanụ. Nke a ...
Nkọwa: Triisobutyl phosphate bụ kemịkal kemịkalụ nwere ngwugwu ngwungwu C12H27O4P. Isi ihe: ~ 205 c (lit.) Njupụta: 0.965 g / ml na 20 c (lit.) Ntugharị ntụgharị: n20 / D 1.420 Ihe ngosi Flash: 150 Celsius C Nrụrụ Anwụ: 0.0191mmHg na 25 Celsius Ngwa: Tri-isobutyl Phosphate eji dị ka akwa inyeaka, penetrant, dai dai, wdg Triisobutyl phosphate eji defoaming gị n'ụlọnga na penetrant. Ọtụtụ-eji na-ebi akwụkwọ na dyeing, ebi akwụkwọ ink, ewu, mmanụ ubi nwekwara, wdg P ...
Nkọwa: Isopropylated Triphenyl Phosphate bụ kemịkalụ kemịkalụ na ngwakọ ngwungwu nke C27H33O4P. IPPP35 bụ plasticizer na-enweghị halogen na-anaghị ere ọkụ na-agaghị emerụ gburugburu ebe obibi ugboro abụọ. Na ụdị phosphate a, IPPP35 nwere ụdị nwere obere viscosity na ọdịnaya site na phosphorus. TheIsopropylated Triphenyl Phosphate na-enweghị ntụpọ na uzo, nke nwere ezi nghọta, ọ nwere ike ịbụ onye na-enwu ọkụ na plasticizer. Isopropylated Triphenyl Phosphate pla ...
Triaryl Phosphates Na-emebi
Nkwupụta: Triaryl Phosphates Iospropylated bụ mmiri mmiri doro anya na ọ kwesịrị ịdị na-echekwa ogologo na ebe dị jụụ, akọrọ na ikuku. Triaryl Phosphates Iospropylated kwesịrị idobe ya na ebe dị jụụ, akọrọ na ikuku. Anụ na ụlọ ụlọ, na-ezere ọkụ ọkụ. Inye na triaryl phosphates isoprenylated price alo, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, n'etiti ndị magburu onwe triaryl phosphates isoprenylated emepụta na China, na-echere gị ịzụta nnukwu ...
Nkọwa: ary Triaryl Isopropylated Phosphate, IPPP35 bụ mmiri na-enwu enwu nke nwere ntakịrị ísì ụtọ, viscosity 78-85 (20 Celsius C), isi ọkụ 220 Celsius C, isi ite 235-255 Celsius (4 mmHg), ntụgharị ntụgharị 1.553-1.556 ( 25 Celsius C), soluble na benzene, mmanya, ether klas. Ọ bụ plasticizer na-enwu ọkụ nke nwere ezigbo nkwụsi ike hydrolytic, mmanụ magburu onwe ya na mkpuchi eletriki, nguzogide akwa na mgbochi antibacterial. A na-ejikarị ya eme ihe na PVC, polyethylene, akpụkpọ anụ, f ...
Description: Molekụla usoro C18H15O3P.Triphenyl Phosphite bụ colorless, icha mmirimmiri edo edo, na uzo mmanu mmanu mmiri mmiri n'elu ụlọ okpomọkụ. A naghị agbasa ya na mmiri ma na-anụ isi ísì ọjọọ. Ọ bụ onye nnọchi anya nke phosphorus antioxidant, chelating n'ụlọnga na stabilizer na PVC ngwaahịa, na ihe dị mkpa n'etiti maka ịkwadebe trialkyl phosphite. Triphenyl Phosphite bụkwa antioxidant inyeaka nwere arụmọrụ dị mma, mgbakwunye plasticizer na mgbakwunye ọkụ ...
Nnukwu Tris (chloroethylmethyl) Phosphate
Nkọwa: Mmiri na-acha odo odo mmanụ mmanu. Dịtụ creamy. Ọ bụ soluble na organic solvents dị ka ethanol, acetone, chloroform, carbon tetrachloride, wdg na ubé soluble na mmiri. Ngwa: A na-ejikarị ya na polyurethane ụfụfụ ọkụ ọkụ na PVC ire ọkụ retardant plasticization, wdg A na-ejikarị ya na akwa akwa kemịkalụ na cellulose acetate dị ka ihe na-ere ọkụ, ọ nwere ike melite nguzogide mmiri, nguzo oyi, na ihe onwunwe antistatic na mgbakwunye na iwepụ onwe ya. Ihe jenera ...
Nkọwa: Tris (2-chloroethyl) phosphate makwaara dị ka trichloroethyl phosphate, tris (2-chloroethyl) phosphate, edebiri dị ka TCEP, ma nwee usoro nhazi (Cl-CH2-CH20) 3P = O na ịdị arọ nke 285.31. Ihe omuma chlorine bu 37.3% na ihe di na phosphorus bu 10.8%. Mmiri na-enweghị ntụ ma ọ bụ nke nwere mmanụ ncha nwere ọdịdị ude dị nro na njupụta nke 1.426. Isi mmiri bụ 64 Celsius C. Isi ihe ọkụ ọkụ bụ 194 ~ C (1.33kPa). Nkọwapụta ntụgharị bụ 1 ....